Date My Pet » 5 Lafo Winter Date Hevitra
Tis ny taom fety fifaliana, ririnina voly sy manokana fotoana amin'ny olon-tiana. Raha mpianatra ianao toa ahy, , izay miezaka mafy mividy trano fidiovana na dia manam-bola taratasy, dia ianao ririnina mitady daty izay samy mahafinaritra ary tsy hivadika ny kitapom-batsy. Ianao amin'ny vintana. Ireo daty dimy hevitra dia lafo ary manafana ny fifandraisanareo izany fialan-tsasatra.
1. Manaova trano gingerbread miara-
Po ao ny mamy nify, ary aoka fanidin'ny kilalaon'afo ny fanorenana ny trano gingerbread. Niasa saina ny amin'ny tsy fahampian'ny injeniera talenta? Sosotra intsony, misy ireo fitaovana gingerbread lehibe izay ahitana ny fitaovana rehetra ilainao, sy mora vakina fampianarana taratasy (ny ankamaroan'izy ireo dia ahitana sary). Niaritra latsaky ny $20, ny fitaovana dia hita ao amin'ny fivarotana lehibe indrindra, fivarotana asa tanana, ary na dia an-tserasera. Tafio ny sasany mahazo fialan-tsasatra sy ny feon'ny fananganana! Ny tapany faharoa mivory mahafinaritra fihinana izany dia smashing zavaboary sy mandevona azy izany miaraka. Antoka ny fampanantenana ny sakafo be sy ny fotoana be.
2. Sôkôla mafana, cuddles sy ny fety sarimihetsika
Tsy misy Mamono ny hatsiaka toy ny zava-pisotro mafana sy ny fitiavany ny fitiavana mirehitra. Maninona angamba mafy loatra. Izay tiako holazaina dia hoe cuddling amin'ny olona iray manokana, ary hankafy ny kapoaka ny sokola mafana afaka manafana ny insides avy amin'ny chilly ririnina toetr'andro. Manampy amin'ny sarimihetsika fety mahazatra toy ny Eleven, Tena Mahafinaritra ny Fiainana, Home irery, Ahoana no nangalatra ny Grinch ny Krismasy na A Krismasy Tantara ary izany no daty farany alina. Niaritra kely, afaka mamonjy vola ianao raha karena eo amin'ny lafiny kalitao lasa ny fotoana sy ny akaiky amin'ny havanao.
3. Mandehana ho alina mandeha ny mahita ny tsara tarehy rehetra jiro
Fety ravaka dia anisan'ny zavatra mahatonga ny ririnina tsara tarehy. Na aiza na aiza ianao no mipetraka, misy dia azo inoana fa ho trano izy trano, nilahatra teny an-dalana teny an-dalana rehefa avy amin'ny jiro, firavaka, garlands ary ny zavatra rehetra fifaliana. Andraso mandra-paharivan'ny andro ary avy eo dia mandeha an-tongotra ho an'ny afovoan-tanàna, na eo amin'ny manodidina ary finaritra mijery ny tsara tarehy sy ny fialan-tsasatra jiro haingon-trano (ny fomba maro ireo fandaharana lehibe inflatable hitanao). Afaka manao izany dia ho lalao amin'ny alalan'ny fifidianana izay manana trano fialan-tsasatra tsara indrindra fanamboarana izay. Niaritra na inona na inona, tsotra izany dia afaka mora foana daty mampahazava ny fifandraisanareo.
Manararaotra ny bodofotsy ny oram-panala, ary ny amin'ny fehin'aina tia ny iray ho an'ny sasany Adventures avy tany amin'ny any ivelany. Tia manao ski ambony hazo fijaliana any firenena, Hiking na ny oram-panala shoeing amin'ny zaridainam-panjakana eo an-toerana na ny lalana. Mifalia manidina nidina ny tendrombohitra sy ny reliving ny fahazazany amin'ny andro tobogganing. Hanorina snowman miaraka na Fort, na mandeha any an-kalamanjana Skating ranomandry rink. Niaritra kely, zavaboary afaka niseho ho toy ny iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny fifandraisana playgrounds niroborobo.
5. DIY asa tanana
Ny Internet no mihazona maro DIY fety maimaim-poana sy ny toromarika hevitra asa tanana. Mifidy ny mpivady mahaliana lohan'ny olona sy ny mpivarotra asa tanana, na mampiasa fitaovana efa mandry ao an-trano, ary mahazo fetsy! Raha tsy ny mpankafy ny zavakanto sy ny asa-tanana indray amin'ny sekolim-panjakana, Tadidio fotsiny fa tsara foana ny hanandrana zava-baovao, ary hivoaka izay hainao. Afa-tsy ianao manana ny mpiara-miasa amin'ny heloka bevava mba hanampy anao avy.
Ireo daty dimy hevitra dia lafo, fomba mahavariana ary manome antoka ny fotoana tsara ho anao sy ny havanao mandritra io vanim-potoana ririnina. Ankafizo ny fialan-tsasatra sy mankafy ny fifandraisanareo.